Constipation and Bowel Control in Burmese | Continence Foundation of Australia
Constipation and Bowel Control in Burmese
ဝမ်းချုပ်ခြင်း နှင့် ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်း
ငွေရေးကြေးရေး AကူAညီ - Financial Assistance
This fact sheet explains what constipation is and suggests some ideas for improvement and tells you where to get more help. ဤစာစောင်သည် ဝမ်းချုပ်ခြင်းအကြောင်းကို ရှင်းပြပြီး၊ အခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက် အချို့သော အကြံပြုချက်များကို ပေးကာ၊ နောက်ထပ်အကူအညီကို မည်သည့်နေရာမှ ယူရမည်ကို ဖော်ပြပါသည်။
ဝမ်းချုပ်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ဖောက်ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အူမကြီး၏ လုပ်ရပ်များ (“ချေး” သို့မဟုတ် မစင်) ကို လွယ်ကူစွာ နှင့်/သို့မဟုတ် ကြိမ်ဖန်လျော့နည်းစွာ စွန့်ထုတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၏ လက္ခဏာများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ကြပါသည်။
မစင် အရာဝတ္ထုများကို မစွန့်ထုတ်နိုင်ခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် သင့် ဝမ်း လုံးဝ မရှင်းသွားသေးဟု ခံစားရခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
“ပုံမှန်” ဖြစ်ခြင်း၏ အဓိပ္ပာယ်ကား အဘယ်နည်း။
သင် အိမ်သာကို ရောက်သည်အထိ သင့် ဝမ်းကို “စောင့်ထိန်း” ထားနိုင်ပါသည်
သင် အိမ်သာအိုးအပေါ် ထိုင်နေပြီးနောက်ပိုင်း၊ ဝမ်းလှုပ်ရှားမှုကို စတင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်
သင့်ဝမ်း အကုန်သွားနိုင်ခဲ့သည်ဟု သင် ခံစားရပါသည်
တစ်နေ့တွင် ၃ကြိမ်မှသည် တစ်ပတ်တွင် ၃ ကြိမ်အထိ၊ ထိုနှစ်ခုအကြား မည်သည့်ပုံစံမျိုးမဆိုဖြစ်နိုင်ပါသည်
“ပုံမှန်” ဖြစ်ခြင်းသည် လူတစ်ဦးနှင့် အခြားတစ်ဦးအကြား ကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။
စားနေကျ အစားအစာထဲတွင် အမျှင်ပမာဏ မလုံလောက်ခြင်း
နေ့စဉ် သောက်သည့် အရည်ပမာဏ မလုံလောက်ခြင်း
ဆေးညွှန်းစာဖြင့် ဝယ်ရသော နှင့်/သို့မဟုတ် ဝယ်ရန်မလိုသော ကိုက်ခဲနာကျင်မှုများ သက်သာစေရာ ဆေးဝါးများ
နာတာရှည် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း နှင့် မီးဖွားခြင်း
အူပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ နှင့်/သို့မဟုတ် ရှေ့ဆက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည့် အူပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ
လျှောကျခြင်း - အတွင်း၌ရှိသော ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ အိကျခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ပြိုလဲခြင်း၊ ၎င်းက ဆီးအိမ် နှင့် ဝမ်း ချုပ်ထိန်းနိုင်မှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးပါသည်။
သင့် “ချေး” မည်သို့ ပုံပေါက်သင့်သနည်း။
သင့်ချေးသည် အညိုဖျော့ရောင် သို့မဟုတ် အညိုရင့်ရောင်၊ ဝက်အူချောင်း ပုံသဏ္ဍာန်ရှိကာ၊ ပျော့ပြောင်းမှုရှိသော်လည်း သိပ်သည်းမှုရှိ၍၊ အလွယ်တကူ စွန့်နိုင်ပြီး၊ အနံ့အသက် အနည်းဆုံးရှိသင့်ပါသည်။ ဝမ်းသွားခြင်း ပုံစံ အမျိုးအစား ၃ သို့မဟုတ် ပုံစံ အမျိုးအစား ၄ ဖြစ်စေရန် ရည်မှန်းပါ။
ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် အူပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
မစင် ဖိသပ်ခံရမှု – ဝမ်းချုပ်ခြင်းကြောင့် မစင်ကို အူမ (အစာချေ လမ်းကြောင်း) တွင် ကျပ်ခဲစွာ ဖိသိပ်ခံရလွန်းသဖြင့် သင်၏ မစင်ကို ပုံမှန် တွန်းထုတ်နိုင်ရန် တွန်းအား မကောင်းတော့ပါ။
မစင် မထိန်းနိုင်မှု (တစ်ခါတစ်ရံ၌ ‘ညစ်ပေမှု’ ဟု ရည်ညွှန်းသည်) – ၎င်းမှာ မစင်အရည် သို့မဟုတ် မစင် အစိုင်အခဲ မတော်တဆ ထွက်ကျခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် (မစင်ကို သိုလှောင်ထားသော) အူ အလွန်ပြည့်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်လည်း ၎င်းမှာ အကြောင်းခံတရားများအနက် တစ်ခုသာဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ မချုပ်ထိန်းနိုင်သော လေပွခြင်း (“လေလည်ခြင်း”) ကို မစင် မထိန်းနိုင်မှု၏ အထောက်အထားဖြစ်သည်ဟု အများအားဖြင့် ယူဆကြပါသည်။
လိပ်ခေါင်းရောဂါ (တစ်ခါတစ်ရံ၌ ‘မြင်းသရိုက်’ ဟု ရည်ညွှန်းသည်) – ၎င်းမှာ ဝမ်းသွားရန် အားစိုက်ညှစ်ခြင်း၏ အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်။ အလေးအပင် မ’ ခြင်းနှင့် အလားတူဖြစ်သော ဤအားစိုက်ညှစ်ခြင်းသည် စအို၏ သွေးပြန်ကြောများကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် သွေးယိုစီးခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း နှင့် ယားခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
စအို ကျွံကျခြင်း – ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းသွားသည့်အခါ၌ ပွင့်၊ ပိတ်သည့် ကြွက်သားကွင်းဖြစ်သော အူမ အတွင်းမျက်နှာပြင်၏ အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်သည် ရေရှည် အားစိုက်ညှစ်မှုကြောင့် စအိုပြင်ပသို့ တွန်းထုတ်ခံရသောအခါတွင် ဤသို့ဖြစ်လေသည်။
ဝမ်းချုပ်ခြင်းက ဆီးအိမ် ချုပ်ထိန်းမှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပုံ
ဝမ်းချုပ်သည့်အခါ၌ သင့်ဆီးအိမ်ကို မတော်တဆ စိမ့်ယိုစေနိုင်ပါသည်။ ပိုလျှံပြည့်နေသော အူမသည် သင့်ဆီးအိမ်က ထိန်းထားနိုင်သော ဆီးပမာဏကို လျော့နည်းစေလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ သင့်၌ မကြာခဏ အိမ်သာတက်ရန် နှင့် အလောတကြီးသွားရန် လိုအပ်စိတ် ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မည်။
အောက်ပါတို့သည် သင့်ဆီးအိမ် နှင့် ဝမ်းကို ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်နေစေပြီး ဝမ်းမချုပ်ရန် ကာကွယ်ပေးနိုင်သော နည်းငါးမျိုးဖြစ်ပါသည်။
သင့်ဝမ်း မှန်နေစေရန်နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်စေရန် ကိုယ်အလေးချိန်ရှိရေးအတွက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် စားပါ
အမျှင်အမြောက်အမြားပါရှိသော ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်စေရာ အစားအစာများကို စားသောက်ပါ (တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး ၃၀ ဂရမ်)။
ဝမ်းမချုပ်ရန် ကာကွယ်ပေးပြီး ဆီးအိမ် အဆွမခံရရန် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သောက်ပါ
သင့်ဆရာဝန်က မလုပ်နှင့်ဟု အကြံမပြုသမျှ၊ နေ့စဉ် ၁.၅ မှ ၂ လီတာ (၆ ခွက်မှ ၈ ခွက်အထိ) အရည်ကိုသောက်ပါ။ အရည်ဆိုသည်မှာ ရေ၊ သစ်သီးအရည်၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ နွားနို့၊ ဂျယ်လီ နှင့် ရေခဲမုန့်တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဝမ်းမချုပ်ရန် ကာကွယ်ပေးပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်စေသော ကိုယ်အလေးချိန်ရှိရန်အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းကို နေ့စဉ်လုပ်ပါ
ဆီး/ဝမ်း ချုပ်ထိန်းနိုင်မှု အားကောင်းစေရန်အတွက် သင့်တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများကို သန်မာနေစေရန်ပြုလုပ်ပါ
တစ်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ဆီး/ဝမ်း ထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ ကူညီရေးဖုန်းလိုင်း ၁၈၀၀ ၃၃ ၀၀ ၆၆ ကို ဖုန်းဆက်ပြီး တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းစာစောင်ကို တောင်းခံပါ။
အိမ်သာသွားသည့် အလေ့အကျင့်များ။ သင် ဝမ်းသွားရန်လိုအပ်သည့်အခါ၌ ချက်ခြင်းသွားပြီး ကုန်စင်အောင် စွန့်ပါ။ သက်သောင့်သက်သာရှိစွာနေရန် မမေ့ပါနှင့်။
သင် ဝမ်းသွားသည့် ပုံစံအနေအထားကို စစ်ကြည့်ပါ
သင့်ဒူးများကို သင့်တင်ပါးများ၏ ရေညီမျက်နှာပြင်အထက် အနည်းငယ်မြှင့်တင်ထားသင့်ပါသည်
အကောင်းဆုံးသော ပုံစံအနေအထားဖြင့် သင်ထိုင်နိုင်ရန်အတွက် ခွေးခြေငယ်တစ်လုံး လိုအပ်နိုင်ဖွယ်ရှိမည်
ဝမ်းနုတ်ဆေးများသည် မစင်ထု ပိတ်ဆို့မှုများ နှင့် အားစိုက်ညှစ်ရမှုတို့ကို တားဆီးရန်အတွက် ဝမ်းသွားရာ၌ လွယ်ကူစေရေးကို အထောက်အကူပြုသော ဆေးဝါးများဖြစ်ပါသည်။
၎င်းတို့ကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင့်ဆရာဝန်အား မေးမြန်းပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့် ဝမ်းနုတ်ဆေးများကို တိုတောင်းသော အချိန်ကာလများအတွက်သာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
ဝမ်းနုတ်ဆေး အမျိုးအစား သုံးခုရှိပါသည်
ထုထည်ကြီးစေသော ပစ္စည်းများ ‐ ၎င်းတို့သည် မစင် (ကျင်ကြီး)၏ ထုထည်ကို ကြီးမားစေပါသည်။ အရည်ကို အနည်းဆုံး ၆ ခွက် မှ ၈ ခွက်အထိ မလုပ်မဖြစ် နေ့စဉ်သောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မွတ်ညက်ချောမွေ့စေသော ဝမ်းနုတ်ဆေးများ ‐ ၎င်းတို့သည် မစင်ကို ပျော့ပြောင်းစေပြီး စွန့်ထုတ်ပစ်ရန် လွယ်ကူစေပါသည်။
လှုံ့ဆော်ပေးရာ/ဆွပေးရာ ဝမ်းနုတ်ဆေးများ ‐ ၎င်းတို့သည် အူတစ်လျှောက် မစင်အား ရွေ့လျားစေရန်အတွက် အူကို ပိုပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားစေပါသည်။
If constipation is severe or continuing, go to your Doctor. အကယ်၍ ဝမ်းချုပ်လွန်းနေလျှင် သို့မဟုတ် ဆက်လက်ဖြစ်နေလျှင်၊ သင့်ဆရာဝန်ကို သွားတွေ့ပါ။
သင့် ဝမ်းချုပ်ထိန်းနိုင်မှုကို ကောင်းမွန်တိုးတက်စေရန် လုပ်ကိုင်ရမည့် ပထမအဆင့်မှာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အတတ်ပညာရှင်တစ်ဦးမှ ချုပ်ထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ စိစစ်အကဲဖြတ်ပေးမှုကို အပြည့်အစုံ လုပ်ပေးရန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးရန် သင့်အား ကူညီနိုင်မည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အတတ်ပညာရှင် အမျိုးစုံလင်ရှိပါသည်။
သင့် အထွေထွေကုဆရာဝန် သို့မဟုတ် အထူးကုကို သွားပြပါ
ဆီး/ဝမ်း ထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ သူနာပြု အကြံပေးအား တစ်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ဆီး/ဝမ်း ထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ ကူညီရေးဖုန်းလိုင်း ၁၈၀၀ ၃၃ ၀၀ ၆၆ ၌ ဖုန်းဆက်ပါ
စကားပြန်ကို အသုံးပြုရန် ဘာသာပြန် နှင့် စကားပြန် ဝန်ဆောင်မှုဌာန (TIS) ၁၃ ၁၄ ၅၀ ကို ဆက်ပါ